စတော့ရှယ်ယာသို့မဟုတ်စတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်းများညွှန်းကိန်း (STODEX) သတ်သတ်မှတ်မှတ်အမျိုးအစားပေါ်အခြေခံပြီးအုပ်စုဖွဲ့ကြောင်းစတော့ရှယ်ယာတစ်စု၏စျေးနှုန်းသို့မဟုတ်တန်ဖိုးကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည်အညွှန်းကိန်းကကိုယ်စားပြုသည်လူအပေါင်းတို့သည်ရှယ်ယာစျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုညွှန်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုနိုင်ငံကများသောအားဖြင့်၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သတ်မှတ်ချက်နှင့်အစတော့ရှယ်ယာအညွှန်းကိန်း sort နှင့်ကုန်သွယ်ရေးဖို့နည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်။
စတော့အိတ်ညွှန်းကိန်းထိုကဲ့သို့သောယူနစ် (အများကြီး), စာချုပ်နှင့်ပေးပို့အချိန်ရဲ့တန်ဖိုးကိုအဖြစ်အချို့သောသတ်မှတ်ချက်ရှိပါတယ်တဲ့စာချုပ်ဖွဲ့စည်းသင့်ပါတယ်။ ကြောင့်ဤသတ်မှတ်ချက်များ၏တဦးတည်းဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုညွှန်းကိန်း difutures စတော့ရှယ်ယာဈေးကွက်သို့မဟုတ်အနာဂတ်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ဖောက်။
ကိုရီးယား Composite စတော့အိတ်စျေးနှုန်းအညွှန်းကိန်းသို့မဟုတ် KOSPI ကိုရီးယားအိတ်ချိန်း၏စတော့အိတ် Market ကတိုင်းအပေါ်ကုန်သွယ်အားလုံးဘုံထိတ်၏အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိကိုယ်စားလှယ်စတော့ရှယ်ယာစျေးကွက် Dow Jones စက်မှုပျမ်းမျှတူသောတောင်ကိုရီးယား၏အညွှန်းကိန်း, ဒါမှမဟုတ် S & P 500 ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာဈေးကွက်အရင်းအနှီးပေါ်တွင်အခြေခံတွက်ချက်ထားခြင်းဖြစ်သည်ဇန်နဝါရီလ 4, 1980 အဖြစ် KOSPI ပေါင်း 100 ၏အခြေစိုက်စခန်းတန်ဖိုး 1983 ခုနှစ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ 2007 ခုနှစ်၏အဖြစ်, KOSPI ရဲ့နေ့စဉ်အသံအတိုးအကျယ်ရှယ်ယာသို့မဟုတ် (ဝမ်ထရီလီယံ) ၏သန်းပေါင်းများစွာသောရာပေါင်းများစွာဖြစ်ပါတယ်။
1. စာချုပ်ယူနစ် $5/ အညွှန်းကိန်းအမှတ်
2. Margin လိုအပ်ချက် $ 500 / တွေအများကြီး
3. ငွေသွင်းငွေထုတ်အချိန်ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် 07,05 မှ 00,00 ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်မှာပွင့်လင်း
4. စာချုပ်တစ်လအလိုအလြောကျမတ်လ, ဇွန်လ, စက်တင်ဘာလနှင့်ဒီဇင်ဘာလမှာလှိမ့်
DAX (Deutscher Aktien ညွှန်းကိန်း) ဂျာမန်စတော့အိတ်အညွှန်းကိန်းဖြစ်ပါတယ်။ DAX ဂျာမန် Equity Market ကအပေါ်အပြာချစ်ပ်အဖြစ်လူသိများကြသည်ဖြစ်သောအကြီးဆုံးနှင့်အရေးပါဆုံးကုမ္ပဏီများ, ၏ segmen ခြေရာခံ။ ဒါဟာချုပ် Standart Segemn အတွက် FWB Frankfurt စတော့အိတ်ချိန်းမှဝန်ခံခဲ့သည် 30 အကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးအရည်ကုမ္ပဏီများပါဝင်သည်။ DAX အဆိုပါစုပေါင်းချုပ်စံ၏စျေးကွက်ဦးထုပ်၏ 80% ခန့်ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
DAX အဓိကအားတစ်စွမ်းဆောင်ရည်အညွှန်းကိန်းအဖြစ်တွက်ချက်သည်။ ဒါဟာအစ, အရှင်အပြည့်အဝအညွှန်းကိန်းအစုစုအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၏အမှန်တကယ်စွမ်းဆောင်ရည်ထင်ဟပ်အကောင့်သို့မြတ်များအထွက်နှုန်းကြာသောအနည်းငယ်အဓိကနိုင်ငံတစ်ခုညွှန်းကိန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
1. စာချုပ်အရွယ်အစား $ 26.5 / အညွှန်းကိန်းအမှတ် (floating)
2. Margin လိုအပ်ချက် $ 2,000 / တွေအများကြီး
08,00 p.m. မှ 07,00 a.m. ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်မှာပွင့်လင်း
3. ငွေသွင်းငွေထုတ်အချိန် နွေရာသီမှာဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်နှင့်
09,00 p.m. မှ 08,00 a.m. ဂရင်းနစ်စံတော်ချိန် ဆောငျးရာသီမှာဂရင်းနစ်စံတော်ချိန်